Ukulungiswa kweinjini yokukhangela: Ngaba kulula okanye kunzima? | Martech Zone
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela: Ngaba kulula okanye kunzima?
NgoMvulo, Matshi 30, 2009 NgoMgqibelo, ngoJuni 16, 2018 Douglas Karr
Kukho itoni yolwazi kwiwebhu ngendlela yokwenza indawo yewebhu. Ngelishwa, i-99.9% yewebhusayithi isasilela nakuphi na ukusebenza. Andizichazi njengengcali ye-SEO, nangona ndikholelwa ekubeni ndinayo ukuqonda ngokupheleleyo izinto uthatha inxaxheba 'ekukhupheleni ikhaphethi ebomvu' kwiinjini yokukhangela.
Xa abahlobo bam becela ingcebiso, ndibanika iziseko:
Bhalisa indawo yakho nge Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle Ukuqinisekisa ukuba isalathisiwe kwaye ayinayo imicimbi. Oku kuyakubonisa izincedisi ekufuneka uzenzile-njengokusebenzisa iimephu zesayithi kunye neefayile zeerobhothi.
Research amagama angundoqo abo basebenzisi basebenzise ukukhangela iimveliso kunye neenkonzo ozibonelelayo. Omnye umzekelo ngumhlobo oqhuba inkampani yokuthumela imiyalezo… kodwa wasilela urhwebo mobile kumxholo wendawo yakhe. Ayisiyonto ikhethekileyo- iqhelekile!
Ukuqonda apho uza kusebenzisa khona amagama aphambili… ukusuka kwigama lendawo, URL or iposi slug, isihloko sephepha, i-h1 tag, izihlokwana, isicatshulwa esibhaliweyo, njl. njl. kunye nokuqinisekisa amagama asetyenziswa amaxesha amaninzi kumxholo.
Ukuqonda ukuba igama elinamandla elinamagama atyebileyo abuyela kwindawo yakho aya kukonyusa kakhulu umgangatho wewebhusayithi yakho ngala magama aphambili. Isicwangciso esihle se-backlink sinokuthatha inxaxheba kwiincoko nakwimibono kwezinye iiblogi zeshishini.
Mhlawumbi eyona nto ibaluleke kakhulu yile Ukubhala nje umxholo omkhulu kwaye ubhale kakuhle. Awungekhe uphumelele raffle ukuba awuthengi itikiti. Okufanayo kuya kwiinjini zokukhangela-awunakho ukubeka isiphumo senjini yokukhangela ukuba awunayo imixholo efanelekileyo kukhangelo. Thenga amanye amatikiti kunye namathuba akho okufunyanwa ukwanda okumangalisayo. Ezi zibalo zilula kakhulu.
Amanye amashishini kunye namagama aphambili akhuphisana kakhulu kangangokuba ifuna Utyalo-mali oluninzi-kubuchwephesha, ixesha, umxholo kunye nezicwangciso zokunxibelelana nomva. Ukuba ufuna ukucofa okunzulu, ndingacebisa ukujoyina iMoz. Ubuncinci, funda iiMoz's Izinto ezikwiNjini yokuKhangela Ukuqonda ngokupheleleyo iimpembelelo ezinokubakho kwiphepha elilula kwinqanaba lenjini yokukhangela. Kukho ngaphezulu Amanqaku e-SEO nakhona!
I-AT & T: I-AIG elandelayo?
Uphando lwasekhaya luyakhula, ngaba useMephini?
Mar 31, 2009 ngo-12: 21 AM
Iingcebiso eziqinileyo. Ndiyifumana i-SEO idideke kakhulu kwaye iyandicaphukisa kuba ndiyazi ukuba ibaluleke kangakanani. Ndifunda kancinci kwaye ndingcono kuyo. Kodwa into enye endiyifumeneyo kukuba nangona ndiyazi ukuba i-SEO yam iyonke mhlawumbi imbi kakhulu ukubeka umxholo kunceda kakhulu.
Bhala rhoqo kwaye usebenzise amagama akho angundoqo. Kuya kuthatha ixesha kodwa kulungile kuGoogle.
Epreli 1, 2009 ngo-2: 56 AM
Ndicinga ukuba ugubungele zonke izihloko eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe kwi-SEO. Kukho iinkampani ezininzi kunye neengcali ze-SEO azikabinalo nofifi malunga nesi sihloko. Ndicebisa ukusebenzisa i-google adwords isixhobo sangaphandle segama elingundoqo ekukhetheni igama elingundoqo elifanelekileyo.
Epreli 1, 2009 ngo-4: 12 PM
I-Seo inzima, nangona kunjalo ukuba indawo yakho isemthethweni kwaye uhlala ucinga malunga nokufaneleka, iyasebenza ngokwenene. Kwakhona kubalulekile ukubona (ngezibalo okanye izixhobo ze-google wemaster) ukuba yeyiphi imiqathango abantu abayikhangela ngokwenene. Iyandimangalisa indlela abanye abantu abayibeka ngayo xa bephanda.
Ukubukela uphendlo lokususa ukhula kunye nokuphelisa izinto ezizisa abantu kwindawo yakho ekungafunekiyo ukuba babekho yindlela elungileyo yokwandisa ukubaluleka kwakho…
Ukubeka uluvo lwakho kwiibhlog ezifana nale yindlela entle nayo!
Juni 28, 2011 ngo-7: 33 PM
UKUBA ubuze oku ngaphambili, ndiya kukuphendula ngovuyo kodwa ngoku ayisiyiyo ngenxa yezixhobo ezininzi zikagoogle ezihluza lonke ikhonkco lewebhusayithi elinokufumaneka kwi-injini yokukhangela kwaye nangenxa yohlaziyo lukagoogle. I-SEO ibe nzima kakhulu kule mihla eyenza ukuba iingcali ze-SEO zibe nobuchule ngakumbi kwaye zibenenkohliso, oko kuyimpembelelo entle.